Nhau - Mhando dzesimba remhepo
Kunyangwe paine mhando dzakawanda dzemhepo dzinogadzirwa nemhepo, dzinogona kupfupikiswa muzvikamu zviviri: yakatwasuka axis mhepo turbines, uko kutenderera axis yemhepo vhiri inowirirana nemhepo nzira; vertical axis mhepo turbines, iko kutenderera axis yemhepo vhiri iri yakatarisa pasi kana iko kunongedzera kwemhepo yekufema.
1. Horizontal axis mhepo turbine
Horizontal axis mhepo turbines akapatsanurwa kuita maviri marudzi: simudza mhando uye dhonza mhando. Iyo yekusimudza-yerudzi mhepo turbine inotenderera nekukurumidza, uye iyo yekudzivirira mhando inotenderera zvishoma nezvishoma. Zvesimba remhepo zera, simudza-mhando yakatwasuka axis mhepo turbines anonyanya kushandiswa. Mazhinji turbines emhepo akabatana emhepo ane anti-mhepo michina, ayo anogona kutenderera nemhepo nzira. Kune madhiri emhepo madiki, ino inotarisana nemhepo mudziyo inoshandisa muswe muswe, nepo kune makuru mhepo turbines, nzira yekufambisa inoumbwa nemhepo inotungamira yekuona zvinhu uye servo motors inoshandiswa.
Turbine yemhepo ine vhiri remhepo pamberi peshongwe inonzi turbine yemhepo yekumusoro, uye turbine yemhepo ine vhiri remhepo kuseri kweshongwe inozoita yekudzika mhepo turbine. Kune akawanda masitaera ehorizontal-axis mhepo turbines, mamwe ane mavhiri emhepo ane akachinjika mashizha, uye mamwe akashongedzerwa nemhepo yakawanda mavhiri pane shongwe kudzikisa mutengo weshongwe pasi pemamiriro eimwe rinobuda simba. Iyo shaft mhepo turbine inogadzira vortex yakatenderedza vhiri remhepo, inoisa mukati mweya, uye inowedzera kufema kwemhepo kumhanya.
2. Vertical axis mhepo turbine
Iyo tangi axis yemhepo turbine haidi kutarisana nemhepo kana mhepo nzira ichichinja. Zvichienzaniswa neiyo yakatenderera mhepo turbine yemhepo, iri mukana wakakura mune izvi. Izvo hazvingorerutsi chete dhizaini dhizaini, asi zvakare zvinoderedza iyo gyro simba kana vhiri remhepo rakatarisana nemhepo.
Kune akati wandei mhando dze vertical-axis mhepo turbines ayo anoshandisa kuramba kutenderera. Pakati pavo, pane mavhiri emhepo akagadzirwa nemahwendefa akapfava uye quilts, ayo akachena ekurwisa michina; S-mhando mahwindimhepo ane chikamu chinosimudza, asi anonyanya kuramba zvishandiso. Midziyo iyi ine torque hombe yekutanga, asi yakaderera tip sipidhi reshiyo, uye inopa yakaderera magetsi kuburitsa pasi pechimiro cheimwe saizi, huremu, uye mutengo wevhiri remhepo.
Post nguva: Mar-06-2021